Taksiga mustaqbalka waa qeyb kamid ah hada (III): myTaxi | Wararka IPhone
Taksiga mustaqbalka waa qeyb kamid ah hada (III): myTaxi
Ka dib markii aan ka hadlay labadii qaybood ee ugu horreeyay ee meerisyadan laba arji oo aan shaqo ku lahayn taksi caadi ah, hadda waxa la gaadhay kii raba inuu casriyeeyo tagaasida noloshiisa. Barnaamijka myTaxi Waa jawaabta ugu fiican adduunka tagaasida ee la siiyo inta kale ee ka soo horjeedda, runtiina waxay tahay in aanu xumaan haba yaraatee. Waxaan u falanqeyneynaa si aan u aragno faa'iidooyinkeeda iyo qasaarooyinkeeda iyadoo diiradda la saarayo faahfaahinta muhiimka ah.
1 Taksi casri ah
Taksi casri ah
Aasaaska barnaamijkan ayaa ah tagsiga noloshaada, maadaama ay noqon doonaan gawaarida aan u isticmaalno inaan dhaqaajinno marka aan safarka ku qaadno mobilka. Marka laga hadlayo habka loo maareeyo safarka, wax waliba waxay la mid yihiin barnaamijyada kale sida Uber ama Lyft, oo ay ku jiraan lacag-bixinta moobiilka iyo fudeydka maamulkiisa, iyadoo la aqbalayo lacag-bixin dhaqameed marka lagu daro suurtagalnimada bixinta deynta ama kaarka deynta iyo PayPal iyada oo loo marayo barnaamijka.
Marka loo barbardhigo beddelka 'casriga' sida Uber iyo Cabify, myTaxi wuxuu leeyahay faa iido laga yaabo inay xiiso u yeeshaan dadka isticmaala qaarkood: iyagoo ku shaqeynaya taksiyada caadiga ah, gawaarida ayaa ku wareegi kara Wadooyinka tagaasida baska, wax aan gawaarida rakaabka rakaabka aan taksiga aheyn loo ogoleyn. Tan macnaheedu waa, aragti ahaan, imaatinka goobta la sii tagayo goor hore.
Hawlgalka adeegga marka loo eego waqtiga Aad ayay u fiican tahay. Magaalooyinka waaweyn, imaatinka tagaasida ee booskayagu aad ayuu u dhakhso badan yahay waana adag tahay inaan sugno, waa wax si weyn loo qadariyo, in kasta oo ay tahay in la aqoonsado in adeegsiga qaar ka dib aan la kulanay waxoogaa qiyaasi ah imaatinka, in kastoo tani ay xoogaa soo noqnoqoto noocan ah codsiyada.
Shaqada Xisaabiyaha ee aan ka heli karno goobaha codsiyada sidoo kale waa mid aad u xiiso badan, maadaama ay noo ogolaaneyso inaan helno qiimaha lagu qiyaasay safarka runtiina run ahaan way ku dhowdahay, in kasta oo ay ku kala duwanaan karto xaaladaha maalin kasta jira.
Heerka is-dhexgalka ma jiraan wax la diido, waa sax, leh midabbo nadiif ah iyo fudeyd aad u muhiim ah oo loo adeegsado dalab noocan ah. Sidoo kale, hawlgalku markasta waa mid ku habboon, iyada oo aan dib loo dhigin nooc kasta oo loo cusbooneysiiyo mar walba illaa iyo inta aan leenahay shabakad moobil firfircoon ama WiFi.
Ogeysiis ku saabsan diiwaangelinta: Waad sameyn kartaa diiwaangelin caadi ah adigoon amaah dallacaad ah lahayn, ama haddii kale waxaad lacag la'aan ku heli kartaa safarkaaga ugu horreeya adoo galaya lambarka "carlos.san57".
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Taksiga mustaqbalka waa qeyb kamid ah hada (III): myTaxi
Amazon Chime waa tartanka ugu culus ee loogu talagalay Skype
Podcast 8x22: Filashadu waxay la korortaa iPhone 8